Aung San/Aung San Suu Kyi » တူတာတွေတော်ပါတော့….Please !!!!	20
Mike says: .ကျနော်ရေးတဲ့စာအပေါ်ပိုဒ်တချို့ အပေါ်ဓါတ်ပုံဘေးရောက်နေတယ်…စာကအောက်ဆုံးမှာတစ်စုတဝေးတည်းဖြစ်ရမှာ
မြစပဲရိုး says: ဦးစော လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဒီနေ့များလွန်းတာရော၊ ပိုသာဆိုးတာရော မို့ အဲဒါကို ညှိပြီး ကြည့်ဖို့ တောင် ခက်သား။
kai says: ဦးစောက.. တော်တော့်ကို တော်တဲ့သူတယောက်လို့တော့ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတယ်…။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျပ်အကဲဖြတ်မိသလောက်တော့ ဦးစောက သူများချောက်ချတာကြီး ခံရနေကျပဲ..
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: သတိကတော့ ပိုတယ် မရှိပါဘူး
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to သက္ကမိုးညို
၁- ပြောပြန်လျှင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားလွန် ကာကွယ်နေသည် ပြောကြမည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှ စဉ်းစားသောအခါ ထိုလူကြီးနှင့် တွေ့ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးတွင် မပါဝင်တော့ပါ၊ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဟူ၍ မည်မျှပင် အသံကောင်း လွှင့်ပါစေ၊ ဟုတ်မဟုတ် စူးစမ်းသည့် သဘောနှင့်လည်း တွေ့သင့်သည်။ ဟုတ်ခဲ့လျှင်လည်း ပိုတွေ့ရမည်။ တွေ့ဆုံခြင်းသည် နေရာပေးခြင်းမဟုတ်။ အာဃာတ ကင်းစင်ကြောင်း ပြရန်ထက် မပိုသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ထို့ထက် ပိုကာ အာဏာစစ်စစ် ရှိနေသေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် တရားဝင် ဥပဒေအရ ဟု တွင်တွင်ပြောခဲ့သူများကို ကျော်၍ အာဏာရှိနေသေးလျှင် တိုင်းပြည်အေးချမ်းရေးအတွက် တွေ့ကို တွေ့ရပေမည်။ တစ်ခုပဲ ရှိသည်။ တွေ့ဆုံခြင်းသည် အပေးအယူအတွက် မဖြစ်စေရ။ အပေးအယူ ဖြစ်ခဲ့သည်တိုင်လည်း အနာဂတ်ကာလအတွက် အပေးအယူ မဖြစ်စေရ။ (ဖြစ်ဟန်တော့ မတူပါ) ပြီးခဲ့သော ကိစ္စများအတွက်မူ မကျေနပ်သည့်တိုင် လက်ခံသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူကို ချမပြသေးသည့်အတွက် ကြိုတင်ကာ ရန်ထောင်ရန် မသင့်ဟု ယူဆသည်။ ၂- ထိုမြေးအဘိုးကို စိတ်စေတနာကောင်းဟု ယူဆကာ ၀မ်းပမ်းတသာ ရှိနေသူများကိုတော့ သတိပေးလိုသည်။ အချိန်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက် တွေ့ဆုံပါရစေဟု ထိုအမျိုးသမီးကြီး တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဟန်ပြသာတွေ့ခဲ့သည်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့သည်။ အခု ထိုအမျိုးသမီးကြီး ပြည်သူ့အားနှင့် အနိုင်ရလုနီးနီးရှိကာမှ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီး ချစ်ပြနေသည်ကို၊ နေရာကောင်းယူသည်ကို ၀မ်းမြောက်ရန် အကြောင်း တစိုးတစိမှ မရှိ။ နောက်ကွယ်တွင် ၀ှက်ထားသော ဓားတစ်လက် ရှိနေမည်မှာ အသေအချာဟု ပြောချင်သည်။ ၃- ဖြစ်လောက်သောအကွက်သည် မြေးဖြစ်သူကို ဇမ်းတင်ကာ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ် တင်ပေးခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထပ်ထပ်ပြောခဲ့ပါသည်။ အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းနေသော အကောင့်သည် အောက်မှ ဆဲဆိုသူမရှိဆိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ တစ်နာရီမလတ်စောင့်ကြည့်ကာ ထိုင်ဖျက်နေမှ ရမည်။ ထိုသို့ဖျက်ရန် အဖွဲ့အစည်းရှိမှ ရမည်။ ပရိုလက်ဖြင့်ရေးသော အရေးအသားသည် ကိုယ်ပိုင်လား။ အခု ကျွန်တော့်ကို ထိုအကောင့်မှ ဘလော့ထားသည်။ ကွန်မန့်သွားမပေးခဲ့ဘူးပါ။ like မလုပ်ခဲ့ဘူးပါ။ ဖေါ်လို မလုပ်ခဲ့ဘူးပါ။ တခါက အဓိပတိမြေးမှ သာမန်အကောင့်လေးတစ်ခုကို ရှာဖွေ ဘလော့သည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သေချာသည်က အဖွဲ့လိုက် နေရာယူလှုပ်ရှားမှုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၄- ဂွမ်းသွားသည်ကတော့ အဘနှင့် မှူးကြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြည်သူ့အမြင်တွင် ရုပ်သေးများအဖြစ် (ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်) ကျရောက်သွားသည်။ အဘိုးကြီး မီးစိမ်းပြမှ လှုပ်ရသော ရုပ်သေးရုပ်များဖြစ်ကာ နိုင်ငံရေးနောက်ခံ ဘာမှ မရှိသော ငမျောက်ငချောက်မြေးလေးလောက်မှ အသုံးမ၀င် ဖြစ်သွားသည်။ ၅- မိတ်ဆွေတယောက်၏ အတွေးကို ပြန်၍ မျှဝေလိုသည်။ အလွန်အမင်း စိတ်ပူရန်တော့မဟုတ်။ သတိရှိစေရန်ပါ။ ထိုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားသူတို့အား မုန်းတီးနေစေရန် အိုင်ဒီယာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်သွင်းလာခဲ့သည်။ ယခု ခရီးတော်တော်ပေါက်ခဲ့ပြီ။ အငယ်ပိုင်း အရာရှိများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တော်တော် မုန်းသူများ ရှိနေပြီ။ ထိုအချိန်ဝယ် သူရို့ ခေါင်းဆောင် ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဖက်လှဲတကင်း ချစ်ပြလိုက်သောအခါ သူတို့ အကောက်အယူများကို လှုပ်ခါပစ်လိုက်နိုင်သည်။ ရှော့ရသွားနိုင်သည်။ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်သူတို့ မရှိသောအခါ မြန်မာပြည်ပြိုကွဲစေရန် ကြံရွယ်နေသော သည်အဘွားကြီး မရှိစေရန် ငါ့တာဝန်ဟု စောက်ရူးထသူတို့ ရှိမလာနိုင်ပါဟု ပြောရန်ခက်လှသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေး အင်မတန် အရေးကြီးသော အချိန်ဟု မြင်ပါသည်။ ၆- ကိုယ်တွေကတော့ ၀မ်းမသာပါ။ ဥပဒေအရဟု တွင်တွင်ပြောထားသူတို့ စကားမှန်လျှင် သည်မြေးအဘိုး လုံးဝမလို။
kai says: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လုပ်ကြံသူသည် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်.. အိန္ဒိယသားမဟုတ်..။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်..။
မြစပဲရိုး says: အခုဘဲကြည့် ပါတော့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရလာဒ်ကောင်းထွက်လာတာ ကို ဘာမှ ကွန်ပလိန်းစရာ မရှိပါဘူးးး
kai says: ဖိုးလပြည့်က… စိတ်ကူးပေါက်ပြီး… ဒီလိုလုပ်..ဟိုလိုလုပ်.. လျှောက်လုပ်မှာကို… သူ့အဖိုးက.. “အေး.. အေး… ” ဆိုပြီးခွင့်ပြုမယ်လို့.. ဇီမမ, ထင်နေသလားတော့မသိ…။
နိုင်ငံရေးတွင်… မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်သွားခြင်းဟူသည်… မရှိ..။ “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” – Franklin D. Roosevelt
အဲဒီသတင်းလေးတော့.. .ရ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: မထင်ပါဘူးးး
kai says: မဖြစ်ပါဘူးကွယ်… စိတ်သာချ..။
အဲလောက်ပါ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျုပ် တူမလေး အတော် တင်း နေပုံဘဲ။
Box ထဲ က ထွက် ပြီး နဲနဲလေး ပို စဉ်းစား ကြည့်လိုက်ပါ သမီး ရေ့။ ဒီလို ပြောလို့ အမြင်မတူတိုင်း တို့ တွေ အမုန်းပွါးစရာ မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်လား။ :-))
padonmar says: ရုပ်ရည်ရော စိတ်ဓာတ်ပါတူတယ်။
Mike says: ကျော်လည်းအာတီဒုံလိုပဲမျှော်လင့်တာပဲလေ…အပေါ်ကသဂျီးတွက်ပြသလို
ဦးဦးပါလေရာ says: ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စု အချက်တစ်ခုမှာ တူသွားမှာကို ကျုပ်ကြောက်တယ်….
မြစပဲရိုး says: အဲဒါကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အများကြီးသာ မယ် ထင်ပါတယ် ကိုပါရေ။
အောင် မိုးသူ says: စိတ်တော့ပူမိတယ်။ ဒီလောက်ပဲ…။
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော့်စိတ်ထဲမတော့—
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်တယ်…တူပါတွေ ရပ်ပေးပါတော့ဗျို့လို့သာအော်ချင်ပါတယ်……….